Raheem Sterling, Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold & Marcus Rashford oo lagu soo daray liistada kuwa ugu qiimaha badan. - Somgoal
Home Premier league Raheem Sterling, Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold & Marcus Rashford oo lagu soo...
Raheem Sterling, Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold iyo Marcus Rashford ayaa lagu soo daray shanta ciyaartooy ee ugu qiimaha badan qaarada yurub sida ay falanqeeyayaashu sheegeen.
Ciyaartooyda England ayaa ku soo biiray liiska Paris St-Germain ee Kylian Mbappe, kaasoo loo magacaabay lambarka koowaad isagoo qiimahiisa yahay 230.5 milyan ginni.
Liiska ayaa waxaa soo diyaariyay CIES Football Observatory waxayna diiradda saareysaa ciyaartoy horyaalada shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub.
Xiddiga Juventus Cristiano Ronaldo, oo 35 jir ah, ayaa ku jira liiska 70aad ee liiska.
Bishii Febraayo, CIES – koox cilmi baaris oo fadhigeedu yahay Switzerland oo ku takhasustay falanqaynta tirakoobka kubada cagta – ayaa sheegtay in Liverpool ay heysato kooxda ugu qiimaha badan qaarada yurub £ 1.27bn, ka hor Manchester City oo ku jirta kaalinta labaad qiime dhan 1.24bn.
Sterling, oo 25 jir ah, ayaa noqday mid ka mid ah ciyaartooyda hogaamiya Manchester City iyo England halka kaalinta seddexaad, Sancho oo 20 jir ah uu u soo muuqday kooxda Borussia Dortmund ee ka ciyaarta Bundesliga.
Xiddiga Liverpool Alexander-Arnold, oo 21 jir ah, ayaa amaaney halyeeyga reer Brazil Cafu isbuucaan halka daafaca Manchester United Rashford uu dhaliyay 14 gool 22 kulan oo Premier League xilli ciyaareedkan ah.
CIES waxay isticmaashaa tiro doorsoomayaal ah si ay uga shaqeyaan qiyamka ciyaartooyda, oo ay ku jiraan da’da, waxqabadka iyo qodobo dhaqaale.
25-ka ciyaartoy ee ugu qiimaha badan Yurub
Europe’s 25 most valuable players
1 Kylian Mbappe Paris St-Germain £230.5m
2 Raheem Sterling Manchester City £173m
3 Jadon Sancho Borussia Dortmund £159m
4 Trent Alexander-Arnold Liverpool £152m
5 Marcus Rashford Manchester United £136m
6 Mohamed Salah Liverpool £129m
7 Sadio Mane Liverpool £124m
8 Antoine Griezmann Barcelona £121m
9 Alphonso Davies Bayern Munich £119m
10 Harry Kane Tottenham £106m
11 Roberto Firmino Liverpool £106m
12 Bernardo Silva Manchester City £102m
13 Gabriel Jesus Manchester City £101m
14 Joao Felix Atletico Madrid £96m
15 Erling Haaland Borussia Dortmund £96m
16 Serge Gnabry Bayern Munich £95m
17 Bruno Fernandes Manchester United £93m
18 Matthijs de Ligt Juventus £93m
19 Mason Mount Chelsea £91m
20 Frenkie de Jong Barcelona £91m
21 Rodri Manchester City £90m
22 Lionel Messi Barcelona £89m
23 Lautaro Martinez Inter Milan £88m
24 Virgil van Dijk Liverpool £88m
25 Saul Niguez Atletico Madrid £87m
Previous articleKooxaha Premier League ayaa isku diyaarinayo sidii ay dib ugu bilaaban lahaayeen kulamada saaxiibtinimo ee garoomada.
Next articleXanta suuqa kala iibsiga: Sancho, Havertz, Aubameyang, James, Thiago Silva, Hojbjerg.